Iapile kunye neapos; s beats ipilisi + isithethi seBluetooth siye ezantsi kumaxabiso asezantsi onke amaxesha ekuthengeni okungcono
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iapile kunye neapos ye-Beats Pill + isithethi seBluetooth iyehla iye kwixabiso elitsha lamaxesha onke kwi-Best Buy
Iapile kunye neapos ye-Beats Pill + isithethi seBluetooth iyehla iye kwixabiso elitsha lamaxesha onke kwi-Best Buy
Iapile kunye neapos; s snazzy Beats-branded audio accessories zihlala zityholwa ngokunganikeli ngexabiso eloneleyo kumaxabiso azo, kodwa ubuncinci ukuya kuthi ga kwiPilisi + isithethi esiphathwayo seBluetooth, loo mpikiswano ayisebenzi ngoku. Okweeyure ezingama-24 kuphela, inkqubo yesandi e-oblong iyafumaneka kwi- $ 99.99 endaweni yesiqhelo ye- $ 179.99 kwi-Best Buy, kunye novavanyo lweenyanga ezintathu lwe-Apple Music kubabhalisi abatsha abafakiweyo ngaphandle kwentlawulo.
Ngelixa ii & apos ayisosona sipho sikhulu ngokukodwa, isaphulelo se- $ 80 kwisithethi esele sidumile siyenza ukuba ibe sisivumelwano sokubulala, ixilongo Iziganeko zamva nje enikezelwa ngumbulali wabathengisi abaphambili besithathu. Iipos mhlawumbi azidingeki ukuba zichaze ukuba iBeats Beill + isabiza ama-180 eerandi xa ithengiwe ngqo kumenzi wayo, kunye nenkampani yabazali esekwe eCupertino, ngelixa iThagethi ibiza i- $ 130 kunye neAmazon njenge- $ 110 ngexesha lokubhalwa.
Okukwintsusa, awuyi kuphumelela, kwaye awuzukukwazi ukuyifumana le nto encinci, inesitayile kodwa inamandla kwaye ihlala ixesha elide isithethi seBluetooth ngexabiso eliphantsi naphina. Oko bekutshiwo, ukuba awuyiyo fan yeApple & apos; s (Imveliso) yenkqubo yeRED, kuyakufuneka ujonge kwenye indawo ukonga ngokufanelekileyo kweminye imisebenzi yepeyinti.
Ngokwendalo, iBeats Pill + iyahambelana neziphatho eziphathwayo ze-Android ukongeza kwii-iPhones, ethembisa ukugcina izibane zivuliwe kunye nomculo odlala ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-12 ngentlawulo enye. I-Beats ikwatsho ukuba isithethi esihambelanayo sinokuhambisa kunye neapos; isandi esikhulu kunobungakanani bayo ', enkosi yenkqubo ye-2-way crossover yenkqubo ye-stereo eyenza umhlaba ophucukileyo wesandi kuluhlu olunamandla kunye nokucaca' kuzo zonke iintlobo zomculo. '
Ewe kunjalo, abathengi babonakala ngathi banelisekile yile nto inokubanako ukufikelela kuyo, ubuncinci ngokusekwe kumndilili we-4.8 weenkwenkwezi oPhambili we-Best Buy kunye ne-4.6-yeenkwenkwezi zeAmazon amanqaku abalwe kumawakawaka omyinge wabathengi kunye nokuphononongwa. Kwaye ukhathalele, bambalwa kakhulu kwabo bantu abathenga le nkwenkwe imbi ngexabiso elifanelekileyo njengoko unakho ngoku.
I-iphone 11 vs inqaku le-10 kunye
iwotshi yeapile yeyona nto ithengiweyo yokuthenga 2
Yothusa! Ezinye iimodeli zePixel zichaphazeleka yi-Daylight Saving Time bug
I-OnePlus 9 kunye ne-9 Pro ziyafumaneka kwi-T-Mobile, ngaba ikhona iVerizon okanye i-AT & T 5G inkxaso?
Eyona midlalo ilungileyo yokusinda kwi-zombie ye-Android kunye ne-iOS
I-iPhone 7 Jet emnyama vs abaMnyama: yintoni & apos; umahluko
I-Night Shift ye-iPhone yakho ayizukukunceda ulale ngcono, isifundo sifumanisa